2 Player ကိုဂိမ်းများအခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ »2Player ကိုဂိမ်းများအခမဲ့
2 Player ကိုဂိမ်းများအခမဲ့ APK ကို
ဒါဟာတူညီတဲ့ကိရိယာ (တက်ဘလက်၏စမတ်ဖုန်း) ရက်နေ့တွင် 1 ကစားသမားအဖြစ် 2, 3, 4, 5, 6, ဒါမှမဟုတ်ပင်အဖြစ်အများအပြားအားဖြင့်ကစားနိုင်သည့် singleplayer / multiple games တွေရဲ့တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပြီးကောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဒီဂိမ်းအော့ဖ်လိုင်းအဘို့ဖြစ်၏ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာဒေသခံ multiplayer.You တစ်ဦးကခုန်ပါတီအပေါ်ကျပန်းလူတွေနှင့်အတူဂိမ်းကစား, သို့မဟုတ်သင့်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲနဲ့တူအဆင်မပြေအခြေအနေများတွင်ရေခဲခွဲသင်္ဘောအဖြစ်သူတို့ကိုအသုံးချနိုင်သည်, wifi ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီ app လည်းအိမ်ထောင်သည်ညီအစ်ကို, ညီအစ်မလေးတွေနှင့်မိဘအဘို့နှင့်အချိန်လွန်မှမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအဘို့, အတူတူကစားရန်အဘို့အစံပြဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဤနှစ်ခုကစားသမားဂိမ်းကအရမ်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်ရယ်စရာရဖို့လေ့ရှိပါတယ်။
အဆိုပါဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီ 3, 4,5နှင့်6ကစားသမားများအတွက်အပိုဆောင်းသည် Modes နှင့်အတူတစ်ဦးနှစ်ဦးကကစားသမားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အတူတကွပိုပျော်စရာကစားပိုကလူ! သင်နှင့်အတူကစားရန်န်းကျင်အဘယ်သူမျှမရှိသည်ဆိုပါမူကား, သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆော့ကစားတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်ပွဲအဘို့သင့်ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ဖို့ 1-player ကို mode မှာတစ်ဦးတည်းဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ထူးခြားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အတူဤနေရာတွင် Mini-ဂိမ်းတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းကျော်ကြားမိုဘိုင်း hits ၏ re-ကြောင့်ပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကကစားသမားအတူတူ screen ပေါ်မှာဆော့ကစား6မှတက်ခွင့်၏အရူးလိုအပ်ချက်ဖို့အဆင်ပြေအောင်နေကြသည်။ ဥပမာ:
- multiplayer အဆုံးမဲ့ပြေးသမား
- flapping အတောင်ပံနှင့်အတူ multiplayer သောငှက်များ
- 3-in-a-အတန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့တူနေကြပါပြီ-tac-toe နှင့်အတူ
- သင်ရဲတိုက်ကိုဖမ်းယူဖို့ဗိုလ်ခြေပေးပို့ဘယ်မှာမဟာဗျူဟာဂိမ်း (Single-player ကိုအတွက်အကုန်လုံး AI အရှိပါတယ်)
- (Pong နှင့်ဟော်ကီရန်နီးစပ်) ဘောလုံး / ဘောလုံး
- ထို 1024 / 2048 ပဟေဠိတစ်ခု multiplayer ဗားရှင်း
ကျနော်တို့မှန်မှန်အသစ်က Mini-ဂိမ်းများကိုထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့အညှိနှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုဤဂိမ်းကိုအကြံပြုကြ!
ဂိမ်းကို install အားဖြင့်သင်တို့ကို Google (AdMob) ၏ privacy ကိုမူဝါဒသဘောတူ: Google.com/intl/en/policies/privacy နှင့်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ Analytics မှ): unity3d.com/legal/privacy-policy
2 Player ကိုဂိမ်းများအခမဲ့
14.32 ကို MB
Letterpress - သမ်မာကမျြးဂိမ်း
Surfy Browser - အကောင်းဆုံး UI၊ AdBlock၊ စာသားမှ ...